Gunners oo 3 laacib oo muhim ah suuqa dhigaysa bisha Jannaayo – Gool FM
(London) 27 Nof 2017 – Arsenal ayaa ku tala jirta inay bisha Jannaayo iibiso ilaa 3 laacib, iyadoo sida uu qorayo The Sun la iibin doono Alexis Sanchez, Mesut Ozil iyo Jack Wilshere waase haddii ay Arsenal ku hesho qiime macquul ah.
Seddexdaba waxaa laga dhaadhicin waayay inay saxiixaan qandaraas cusub iyadoo uu qandaraaskoodu dhacayo xagaaga soo aaddan.
Kooxda Gunners ayaase ku tala jirta inay Sanchez iyo Ozil markale isku daydo inay qandaraas cusub ka saxiixdo, balse tiiyoo ay kooxda Emirates arrintaa ku dadaalayso waxaa misna muuqata inay labada laacibba ay ka go’an tahay inay meel kale eegaan iyadoo ay isha la raacayaan camaaliqooyinka Yurub.
Wilshere, 25, ayay isaga dhici kartaa inuu qandaraaska cusboonaysiiyo balse wuxuu u baahan yahay damaanad ku aaddan inuu qayb ka yahay qorshaha macallin Arsene Wenger.
TOOS u daawo: Atalanta vs Benevento - LIVE (Shaxda sugan)